Wararka Maanta: Jimco, Aug 3 , 2018-Booliiska Sweden oo toogasho ku dilay Nin dhalinyaro ah oo sitay Qori Macmal ah
Booliiska ayaa rasaas ku furay Eric Torell oo 20 jir ah, iyaga oo ka jawaabaya wax ay ku tilmaameen "xaalad halis ah" arrintaas ayaana dhacday saacadihii hore ee subaxnimadii Khamiista.
Dawladda ayaa lagu wargaliyay in la la'yahay ninkaas ka dib markii uu xaafadda ka baxay saacado ka hor marka la dilay, sida ay qoyskiisu sheegeen.
Katarina Söderberg oo ah Eric hooyadii ayaa sheegtay in qorigu uu ahaa hadiyad, wiilkeedana waxay ku tilmaantay qofkii ugu naxariis badnaa Adduunka.
Katarina ayaa warbaahinta Expressen ee dalka Sweden u sheegtay in Eric uu naafo ahaa isla markaasna uu hadalku aad ugu adkaa. Hooyo oo kali ahna uu dhihi jiray.
Qoriga caaga ah ee uu watay marka la tooganayay ayay ku tilmaantay mid u ekaa qoryaha yaryar ee darandooriga u dhaca.
Katarina waxay sheegtay in uusan daqsi xataa dhibaato u gaysteeen.
Arrintan ayaa ka dhacday deegaanka Vasastan ee casimadda dalka Sweden ka dib markii booliiska lagu wargaliyay nin qori wata.
Saddex askari ayaa la sheegay in ay goobtii yimaadeen ayna qaabileen dhanka Eric, waxay ku amreen in uu qoriga dhigo, markii uu amarka qaadan waayay ee uu u muuqday in uu ficil halis ah gaysan rabo ayayna toogteen, sida uu booliisku sheegay.
Eric ayaa isbitaal la geeyay balse xoogaa ka dib ayaa la xaqiijiyay in uu dhaawicii u geeriyooday.
Katarina waxay sheegtay in wiilkeedu uu hadda ka hor iska bixi jiray loona soo celin jiray ama isaguba iska soo laaban jiray.
Waxaa hadda socda baaritaan ku saabsan in booliisku ay sixin u maareeyeen xaaladda, sida ay ku warramayso warbaahinta Expressen.